नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ४५ – Pradesh Network
बिबिध मुख्य समाचार समाचार स्वास्थ्य
नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ४५
Posted on July 24, 2020 July 24, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
९ साउन, वीरगञ्ज । कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ४५ पुगेको छ ।
मृतक बारा परवानीपुर गाउँपालिका–४ घर भएकी १७ बर्षीया युवतीको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामो पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ड डा मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘शंकास्पद संक्रमितको रुपमा कोभिड अस्पतालमा उपचार गरिरहेका थियौं, उपचारको क्रममा अपरान्ह मृत्यु थियो’ डा. उपाध्यायले भने ‘अहिले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।’
प्रयोगशालामा शुक्रबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीसहित नौ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बुधबार नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गर्दा अवस्था गम्भीर देखिएपछि उनको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।
आरडीटी एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएपछि कोरोना संक्रमणको आशंकामा बिहीबार गण्डक कोभिड अस्थायी अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा शुक्रबार अपरान्ह मृत्यु भएको हो ।
‘पखाला लाग्ने र जिउ काम्ने भइरहेको थियो, सँगसँगै स्वास प्रश्वासमा पनि समस्या थियो’ कोभिड अस्पतालका डा. निरज सिंहले ।
वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालका अनुसार बुधबार राति साढे १० बजे उनलाई नारायणी अस्पतालबाट वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा ल्याइएको थियो ।
आरडीटी पोजेटिभ देखिएपछि हेल्थ केयरमै स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । बिहीबार रिपोर्ट नआएपछि जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर गण्डक अस्पतालमा रेफर गरिएको अस्पतालका सञ्चालक डा अबुलहैस अन्सारीले बताए ।
‘अक्सिजन मेन्टेन भइरहेको थिएन, ७५ प्रतिशत देखाइरहेको थियो । छातीको एक्सरे गरेर हेर्दा फोक्सो पुरै खराब देखिएको थियो’ उनले भने ‘कोरोना संक्रमणको आशंका भएपछि गण्डक अस्पतालमा रेफर गरेका हौं ।’
उनमा स्क्रब टाइफससमेत पोजेटिभ देखिएको डा‍. अन्सारीले बताएका छन् । इमर्जेन्सीमा उनको उपचारमा संलग्न ५ जना कर्मचारीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको र इमर्जेन्सी सिल गरेर अर्कै ठाउँबाट सेवा दिइरहेको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालले जनाएको छ
गण्डक कोभिड अस्पतालमा ५४ जना संक्रमित उपचाररत छन् । जसमध्ये ४ जनालाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
आज नेपालमा थप १२०४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्ठी ,कुल संक्रमितको संख्या ६२,७९७
सप्तरी – पछिल्लो २४ घण्टामा १२०४ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६२ हजार ७९७ पुगेको स्वासथ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। हाल देशभर १७ हजार १२९ जना सक्रिय संक्रमित छन्. हाल ७ हजार ७३५ क्वारेन्टाइनमा छन्। आज १४४७ जना निको भएका छन्। हालसम्म ४५ हजार २६७ […]
बेलबारीको पाँचौ नगरसभा सकियो
विराटनगर, ३० फागुन । २ वटा ऐनहरु पारीत गर्दै मोरंगको बेलबारी नगरपालिकको पाँचौ नगरसभा सम्पन्न भएको छ । दुई दिन सम्म चलेको नगरसभाले खेलकुद तथा सार्वजनिक सम्पति संरक्षण सवन्धि ऐन पारीत गरेको प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । नगरसभावाट ऐन पारीत गरेपछि खेलकुद बिकास समिति गठन गर्ने वाटो समेत खुलेको छ भने सर्वाजनिक जग्गाहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन […]
विराटनगर, १३ जेठ । विश्वमा कोरोना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४८ हजार पुगेको छ । आज साँझ सम्म ३ लाख ४८ हजार ३ सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वभर ५६ लाख ११ हजार बढी संक्रमित मध्ये २३ लाख ८८ हजार जना उपचार पछि निको भएका छन् । ५३ हजार १ […]
काँकडभिट्टा नाकामा खटिएका १८सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
सप्तरीमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण को पुष्ठी